नेपाली युवतीहरुको सेक्स भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल ! – Etajakhabar
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् कि ? कतै उनीहरुसँगै छिल्लिएर भिडियोमा कुराकानी गर्ने बानी छ भने साबधान ! सम्झनुस तपाई अब फस्नु भयो ! अझै तपाई यहि कुराकानीमा नांगिनुभएको छ भने त पक्का हुनुस् तपाईको नांगो शरिर र गोप्य अंगको भिडियो लाखौंले हेरिसक्यो । नेपाली युवामाफर्त बिदेशबाट चलेको एउटा अश्लिल साईटले नेपालका झण्डै ३ हजार बढि महिलाको अश्लिल दृश्य सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको छ ।
गएको ४ बर्षदेखी बिभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेका ति भिडियोलाई त्यही अश्लिल साईट मार्फत पतिपत्नीबीच वा अन्य अवैध सम्बन्धमार्फत बनेका यौनजन्य क्रियाकलापमात्रै होईन । नुहाउदै गरेका, शौचालय जाँदा, सपिङ मलका वा यस्तै अन्य भिडियो अश्लिल साईटमा अपलोड गरेको भेटिएको छ
यसबाहेक बिदेशबाट नेपालमा रहेका महिलाहरु र बिदेशमै रहेका महिला र पुरुष बीचको अश्लिल कुराकानी र यस्तै दृश्यहरुसमेत सोही साईटमा अपलोड भएका छन ।
झण्डै ५ सय बढि नेपाली महिलाहरुको बदनाम गरि पैसा कमाउने नियतले सञ्चालन भएको उक्त साईट दक्षिण कोरियामा बस्ने नेपालीबाटै संञ्चालन भएको खुलेको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढि बिदेशमा हुने केटाहरुसँग नेपालमा रहेका महिलाले नांगिएर गरेका भिडियो च्याटका दृश्य छन् । त्यसबाहेक चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठ, र केही समयपहिले प्रकाश ओझाले खिचेको भनिएको गतबर्ष आत्महत्या गरेकी नायिका जेशिका खड्काका भिडियोसमेत छन् ।
ठमेलमा यौनकर्मिकै रुपमा काम गरिरहेका महिला र पोखरा, बाग्लुग, काठमाडौं, धरान र चितवनका गृहणी महिलाका भिडियोसमेत उक्त साईटमा अपलोड भएका छन् ।
यसबाहेक निक्कै सम्पन्न परिवारकीजस्ती देखिने पोखराको अधिकारी थरकी एक यूवतीले स्काईपमा नांगिएर हस्तमैथुन गरेको भिडियो समेत ३ लाखले हेरिसकेका छन् ।
पोखराकै बराल थरकी महिला र चितवनकी एक युवतिले सँगै नुहाउदैं गरेको र एउटै लोग्ने मान्छेले दुबैजनालाई साबुन लगाउदैं गरेको भिडियो समेत उक्त साईटमा ३ लाख ९० हजारले हेरिसकेका छन् ।
अष्टेलियामा नर्सको काम गर्ने नेपाली महिला र एक भारतीय वा बंगलादेशीजस्ता देखिने पुरुषको यौनक्रियाकलापको भिडियो ९ लाखले हेरेका छन् ।
भने नेपालको धरानका यूवा युवतीको लण्डनमा छिल्ल्दिैं गरेको यौनसम्बन्धको भिडियो पनि ९० हजार बढिले हेरिसकेका छन ।
नेपालमा पुर्णत बन्द रहेको यो साईट दक्षिण कोरियामा भने निक्कै धेरैले भिजिट गर्ने साईटमा पर्दछ । वेभसाईटको साईटभिजिट मापन गर्ने एलेक्साका अनुसार, यो साइट दक्षिण कोरियामा हेरिने साइटमा ८९३ नम्बरमा छ भने संसारभर हेरिने साइटमा यो शनिबार २१,४९१ मा छ । काठमाडौँमा केही इन्टरनेट प्रदायकले यो साइटलाई ब्लक गरेका भएपनि ।
गुगलमा ब्लक भएका स्थानमा समेत सफ्वेयर नै इन्स्टल गरेर हेर्न सकिने भएकाले नेपालमा समेत केहीले यो साईट नियमित हेर्ने गरेको अनुमान छ । केही भिडियोहरुमा अश्लिल दृृश्यमा भएका महिलाको नाम ठेगाना समेत उल्लेख भएकाले चिनजानका मान्छेले खबर गरेपछि ति भिडियो हटाईएको पनि भेटिएको छ ।
यसरी अपलोड भएका भिडियोहरु साइटमा कहिले अपलोड भयो भन्नेसमेत उल्लेख छ । यसरी अपलोड हुने भिडियोहरु सबैभन्दा बढि जो सँग महिलाले बिश्वास गरेर अश्लिल भिडियोका लागी तयार भएका हुन्छन उनिहरुबाटै अपलोड हुने गरेको अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी बताउँछन ।
त्यसबाहेक कहिलेकाही नजिकका साथीभाई वा छिमेकीहरु मार्फत यस्ता घटना हुने गरेका छन् । केही समयपहिले कतारमा कार्यरत पतिसँग भएको नांगो भिडियोच्याट भोलिपल्ट युट्युवमा अपलोड भएपछि तनहुँकी एक महिलाले आफन्तको सहयोग प्रहरीमा उजुरी हालिन् । २ सय बढिले हेरेपछि युट्युवबाट हटाईएको त्यो भिडियो उनकै श्रीमानसँग बस्ने साथीले युट्युवमा हालिदिएको खुलासा भएको थियो ।
एउटै ल्यापटप प्रयोग गर्ने साथीले आफु काममा गएको बेला उक्त भिडियो भेटेर सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएको ति महिलाले सुनाईन । त्यस्ता भिडियोहरुमा ‘भण्डारीकी बुहारी नुहाउँदै गरेको’ ‘छिमेकी गुरुङ्नी भाउजु’ मगर्नी दिदि, तामाङ्नी यूवती जस्ता नामले धेरै महिलाकै अपमान हुने गरी साइटमा पोष्ट भइरहेका छन् । यसका साथै जापानमा रहेका नेपालीको भिडियो, अस्ट्रेलियामा नेपाली सेक्स भनेर पनि भिडियो अपलोड गरेका छन् ।
यसरी भाईरल बन्दै गएका अश्लिल भिडियोले धेरैको व्यक्तिगत जीवन नै बर्बाद पारेको छ । यस्तो गम्भिर अपराधमा संलग्न साईटबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरि कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
अन्याथा व्यक्तिगत जिवनसँग सम्बन्धित भिडियोहरुका कारण धेरैको जिवन बबार्द हुने निश्चित छ । यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा सहजै नांगिन तयार हुने महिला र यौनसम्बन्धका बेला फोटो खिच्ने वा भिडियो खिच्नेहरु थप संयमित हुनु आवस्यक देखिन्छ । टिभी अन्नपूर्णबाट
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १३, २०७४ समय: ६:५६:४६